China Polyester & Nylon Nucleator P-24 yoMvelisi kunye noMthengisi | BGT
Ipholiyesta kunye neNylon Nucleator P-24
P-24 yikhompawundi yomzimba ye-Arhente yeNyukliya embalwa yetyuwa ende ye-polyester yetyuwa ukukhawulezisa i-crystallization yePolyester kunye neNylon.
Ingasetyenziselwa iPET, iPBT kunye neNylon.
P-24 yikhompawundi ebonakalayo ye-arhente ye-nucleating embalwa yetyuwa ende ye-polyester yetyuwa ukukhawulezisa i-crystallization yePolyester kunye neNylon.
1.Ukunciphisa umjikelo wokubumba kunye nokwanda kwemveliso.
2. Ukuphucula ukutshatyalaliswa.
3. Ukuphucula uzinzo lweemveliso.
4. Ukunciphisa imveliso ukuncipha.
5. Ukuthintela ukuqhekeka koxinzelelo lweemveliso.
6. Ukuphucula iipropati zoomatshini (ukwandisa amandla okuqina kunye nobulukhuni).
7. Ukuphucula i-gloss yomhlaba.
I-PET, i-PBT, iNylon
0.2% -1% (ngesiqhelo imalunga ne-0.5%)
20 kg / ingxowa
Egqithileyo Ukukhanya kwe-Brightener OB-1
Okulandelayo: Ummeli weNyukliya we-PET-98C
Ummeli wenyukliya wePET P-24